China ntụ ọka Milling Equipment, Factory Milling Equipment Supplier
Pneumatic ala Mill
Igwe igwe na-ekpo ọkụ ọkụ bụ ezigbo igwe na-egwe ọka maka ịhazi ọka, ọka wit, ọka durum, rye, ọka bali, buckwheat, sorghum na malt.
Igwe igwe eletriki eletriki bụ igwe na-egwe ọka maka ezigbo ọka, ọka wit, ọka durum, rye, ọka bali, buckwheat, sorghum na malt.
Dị ka igwe eji ekpocha ntụ ọka, planiftert dabara maka ndị na-emepụta ntụ ọka ndị na-ahazi ọka wit, osikapa, ọka durum, rye, oat, ọka, buckwheat, were gabazie.
Ntụ ọka Mkpụrụ Ngwunye Ahụhụ
Ntụ ọka egweri ahịhịa ahụhụ na-ebibi ebe ọ bụla na ihe igwe ihe ntụ ọka nke oge a iji mee ka mmịpụta ntụ ọka wee nwekwuo igwe nri.
A na-arụpụta onye mgbapụta dịka atụmatụ anyị dị elu. Igwe ihe eji eme ihe na usoro di iche iche emeela ka o doo anya na o kwesiri.
Obere ntụ ọka Plansifter
Obere ntụ ọka Plansifter maka sifting.
Oghere na-emechi emechi mechiri emechi, Iyọcha ma kewaa ihe dịka etu esi arụ ọrụ, A na-ejikarị ya eme ihe na ntụ ọka, osikapa, igwe nri, a na-ejikwa ya na Chemical, Medical, na ụlọ ọrụ ndị ọzọ
Mono-Nkebi Plansifter nwere kọmpat Ọdịdị, ìhè arọ, na mfe echichi na ule na-agba ọsọ usoro. Enwere ike iwebata ya n'ọtụtụ ebe a na-egwe ọka maka ọka wit, ọka, nri, na kemịkal.
Akụkụ ejima ahụ bụ ụdị ngwa eji egwe ọka. A na-ejikarị ya eme ihe maka ntụgharị ikpeazụ n'etiti siftifter site na Planififter na ntụ ọka na-akwakọba na ntụ ọka ntụ ọka, yana nhazi nke ihe ndị na-emebi emebi, ntụ ọka wit na-achaghị acha, na ihe ndị a na-egweri.
Akụrụngwa ọka ntụ ọka - nhicha
Ntụ ọka na-eme ka a na-eji ntụ ọka eme ihe n'ọtụtụ ebe iji mepụta ntụ ọka nwere oke mma. Ihe ịga nke ọma ejiri mepụta ntụ ọka semolina na igwe ọka ntụ ọka durum.
Hamma igwe nri
Dị ka igwe na-egwe ọka, anyị SFSP usoro hama na-egwepịa nwere ike kụrisịa iche iche nke granular ihe dị ka ọka, sorghum, ọka wit, agwa, anuahade soy bean pulp achicha, were gabazie. Okwesiri maka ulo oru dika imepụta fodder na mmeputa ogwu.
The bran finisher ike ga-eji dị ka ọgwụgwụ nzọụkwụ maka n'imeso bran iche na njedebe nke mmepụta akara, ozokwa mbenata ntụ ọka ọdịnaya na bran. Ngwaahịa anyị nwere obere nha, ikike dị elu, ike oriri dị ala, ọrụ ndị ọrụ na-arụ ọrụ, usoro mmezi dị mfe, na arụmọrụ kwụsiri ike.
YYPYFP Series Pneumatic ala Mill
YYPYFP usoro pneumatic roller mill na-arụ ọrụ dị elu yana arụmọrụ siri ike na obere mkpọtụ, arụmọrụ na-adaba adaba na ndozi dị mfe yana ọnụego ọdịda dị ala.